Vorwisa Covid nemitambo | Kwayedza
08 Jun, 2021 - 13:06 2021-06-08T13:06:38+00:00 2021-06-08T13:06:38+00:00 0 Views
SANGANO rinoona nezvemitambo mumusha weWarren Park nedzimwe nzvimbo dzakakomberedza guta reHarare rinoti riri kurwisa chirwere cheCovid-19 kuburikidza nekusimudzira matarenda evechidiki mumitambo.
VaFidelis Dhliwayo (34), avo vanova mumwe wevavambi vesangano reWarren Park Sports Administration and Management Committee (WARSAMAC), vanoti vakariumba mugore ra2016 nechinangwa chekusimudzira matarenda evechidiki mune zvemitambo.
Vanoti kunze kweWarren Park, sangano ravo rine nhengo dziri kuCold Comfort, Dam View, Westlea nekuBelvedere West.
“Taona kukosha kwesangano redu iri munguva ino yekurwisa denda reCovid-19 sezvo tiri kutora vechidiki tichikwenenzvera zvipo zvemitambo yavo tichiita kuti vawane zvekuita. Tinotora vose vakomana nevasikana uyewo varume nemadzimai.
“Nekuda kwekutorwa kwezvinodhaka nevechidiki, panguva ino taona tichibudirira zvikuru kubvisa vechidiki ava mukudhakwa vachiuya kumitambo yavanoda,” vanodaro VaDhliwayo.
Vanoenderera mberi vachiti, “Tinonyoresa vanobvira pamakore mapfumbamwe zvichikwira kusvika kumakore makumi maviri nematatu okuberekwa. Tinotarisawo mitambo yevaye vane mitezo isina kuita zvakanaka avo tiri kubatsirawo. Tabvisa vechidiki kubva mune zvakawanda zvakaipa zvavaigona kuita panguva ino yekurwisa Covid-19.”
Vanoti kunze kwaizvozvo, vanokurudzira mitambo iyi sezvo ichisimbisa miviri zvinova zvinorwisana nedenda reCovid-19 sezvo miviri inenge yakagwinya.
“Nechirongwa ichi, tiri kushanda takabatana semhuri tichivaka nhandare dzemitambo inosanganisira yenhabvu yevarume neyevanhukadzi, chess, tsoro, draft, karate, kumhanya, boxing, volleyball, tennis, basketball nemimwe yakawanda.” vanodaro VaDhliwayo.
Vanoti vari kushanda zvakare vakabatana nesangano reSports and Recreation Commission (SRC).
“Takawaniswa nzvimbo yakatandavara mahekita makumi maviri iyo yatichavaka nhandare dzemitambo yakasiyana tichibatsirwa nemasangano anotsigira mitambo muno nekunze uyewo vanhu vari kuwana zvekuita sezvo vamwe vari kupinda mabasa kuburikidza nemitambo yavanoita iyi,” vanodaro VaDhliwayo.